गरे के हुदैन ! ढिक्री बेचेर मासिक ९० हजार | Kattwal.com
गरे के हुदैन ! ढिक्री बेचेर मासिक ९० हजार
ढिक्री परिकारलाई व्यवसायसँग जोडिएको छ । तराईका विभिन्न ठाउँमा होमस्टे, रेस्टुरेण्ट खोलेर थारु परिकारमा पहिलो ब्रान्डको रुपमा ढिक्रीलाई बनाइएको पाइन्छ ।
सन्तोष दहित, दाङ साउन ११ । ‘मध्य तथा पश्चिम नेपालमा निकै चर्चित छ, ढिक्री । यो परिकार आदिवासी थारु समुदायमा लोकप्रिय छ । दशै, तिहार र माघीमा विशेष रुपमा ढिक्री खाने प्रचलन छ । विशेष खुसीयालीका अवसरमा मात्रै होइन, माइतीबाट बिदाई भएर घर जाने चेलीका लागि कोसेलीका रुपमा पनि यही ढिक्री प्रचलित छ ।
थारु समुदायमा दशैं र तिहारमा आफ्ना देउतालाई ‘ढिक्री’ प्रसादको रुपमा चढाउने गर्दछन् भने माघीमा थारु समुदायमा विशेष परिकारको रुपमा ढिक्री खाने प्रचलन छ । चाडपर्व र खुसियालीमा मात्रै नभएर आफूलाई खान मन लागेको खण्डमा जुनसुकै बेला पनि बनाएर खाने गरिन्छ ।
यद्यपि, चाडअनुसार ढिक्रीको आकार र बनावट फरक हुन्छ । अहिले भने ढिक्रीको परिकार थारू होमस्टे तथा थारु समुदायको बाक्लो बस्ती रहेको क्षेत्रका बजारका मा खोलिएका थारू होटलले पनि बेच्न थालेका छन् । यसकै उदाहरण हो, काठमाडौं, कीर्तिपुरको बरघर रेस्टुरेन्ट र नेपालगञ्जको गोचाली रेस्टुरेन्टको मेनुमा राखिएको ढिक्री ।
यो मःमः जस्तै बाफमा उसिनेर पकाइने पीठाको परिकार हो । कसैले गुलियो मिलाएर ढिक्री बनाउँछन् भने कसैले सादा ढिक्री बताउँछन् । व्यापारिक हिसाबले बनाइने ढिक्रीमा नरिवल पनि मिश्रण गर्ने गरेको पाइन्छ ।
अहिले ढिक्री परिकारलाई व्यवसायसँग जोडिएको छ । तराईका विभिन्न ठाउँमा होमस्टे, रेस्टुरेण्ट खोलेर थारु परिकारमा पहिलो ब्रान्डको रुपमा ढिक्रीलाई बनाइएको पाइन्छ । नेपालगञ्जस्थित गोचाली रेस्टुरेण्ट सञ्चालन गर्दै आएका सोम डेमनडौराले आफूहरुको मुख्य आकर्षकको रुपमा ढिक्री रहेको बताए ।
प्रति पिसको ५ रुपैयाँका दरले उनले ढिक्री बेच्दै आएका छन् । उनले भने, ‘ढिक्रीको परिकार बेचेर मासिक ९० हजारसम्म आम्दानी लिइरहेकाका छौं ।’
‘स्वास्थ्यको लागि पनि फाइदा हुने र, शुद्ध साकाहारीका लागि पनि ढिक्री परिकार सबैभन्दा उत्तम हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो परिकार सबैको रोजाइमा पर्न थालेको छ ।’
उनी भन्छन्, ‘हुन त हाम्रो रेस्टुरेन्टमा अन्य विभिन्न थारु परिकारहरु छन्, तर ढिक्री परिकार जत्तिको अन्य परिकार त्यति रोजाइमा परेनन् ।’ मान्छेमा इच्छा शक्ति भयो भने लोकल परिकारबाट पनि राम्रो आम्दानी लिनसकिन्छ भन्ने उदाहरण हुन्, सोम डेमनडौरा ।
यसैगरी अहिले काठमाडौको कीर्तिपुरमा पनि ढिक्री परिकार निकै चर्चामा छ । सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न मिडियाहरुमा पनि ढिक्रीको चर्चा हुन थालेको छ । कीर्तिपुरको पाँगा स्थित खोलिएको बडघर रेस्टुरेन्टमा ढिक्रीका परिकारहरु सबैको रोजाइ बन्दै आएको छ ।
बडघर रेस्टुरेण्ट सञ्चालक सिताराम थारुले भने, ‘ढिक्री परिकारको स्वाद लिन दिनप्रतिदिन ग्राहहरुको घुइचो लाग्ने गरेको छ ।’ ढिक्रीसँगै घोङघी र अन्य थारु परिकार बेच्दै आएता पनि उनले ढिक्री परिकारबाट राम्रा आम्दानी लिइरहेको बताए ।
दिल्लीबाट दुई नेपाली युवतीको उद्धार
बैतडीमा हराएका ६७ महिलामध्ये दश जना मात्रै फेला बाँकीको अवस्था अज्ञात
उदाहरणीय प्रदेश २ को दलित सशक्तीकरण ऐन
यातायात व्यवस्था कार्यालय सर्‍यो